Kwenye yezona zikhetho zokuphumelela kunokuba uthande ingqalelo kwiintloko zama-female ezintle, izibonda okanye intamo enhle kakhulu umzobo we tattoo. Enyanisweni, ukunyanga umzekelo ongaqhelekanga kumzimba wesetyhini kunokungabonakali. Ngoko ke, kubafazi abahle abangafuni ukuphazamisa isikhumba sabo kunye namathambo aqhelekileyo, kukho ukhetho olungenacala lokuzihlobisa ngokwenza umzekelo we-henna. Akukusoloko kuyimfuneko ukuthabatha kwiinkonzo zengcali, kuba unokwenza tattoo nge-henna ngokwakho.
Ipeyinti ye-henna emzimbeni yavela kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwaye amaYiputa amandulo ahlobisa imizimba yawo ngemidwebo. Ekuqaleni, imidwebo enjalo ichongiwe yintsapho ehloniphekileyo. Kamva babethwa njenge-kind of amulet, ezaziwa ngokuba yi-Mendi.
Abasetyhini baseMpuma banethemba lokuba bawakhusela kwiintlungu. Ukongezelela, iipateni zithatha ingqwalasela kwimilenze emilenze, izandla ezithandekayo. Iphunga elifihlakeleyo nelifihlakeleyo le-henna linokutshabalalisa umnqweno wesilisa. Kwaye, i-henna igcina ukuthoba kunye nobumnene besikhumba.
Ngoko, ukuba unqume ukwenza tattoo tattoo ekhaya, ngoko siyancoma ukuba uthenge izithako zokulungiselela ukudibanisa umbala. Uya kuyimfuneko:
i-henna yendalo, eyenzelwe ngokukodwa ukudweba emzimbeni,
i-basma, itiye, ikhofi yomhlaba,
Ukulungiselela ipende ye tattoo, thabatha i-20 gram ye-henna powder uze udibanise nejusi yamakhemitha amaninzi. Ukuze wenze umbala ubonakale ubumnyama, sicebisa ukuba kwongeke i-basma. Emva koko faka i-teaspoonful yeeshukela kunye noncedo lwejisi lemon uzisa ubunzima kwilizwe elimandla. Ngoku wubungela ubukhulu kwi polyethylene kwakhona kwaye ushiye kwindawo efudumeleyo ngobunye ubusuku.
Kukho enye iresiphi yokulungiselela ii tatto ze-henna. Kwisiqingatha ilitha yamanzi abilayo, uthele iipunipoli ezimbalwa zetiyi emnyama okanye iipunipoli ezimbalwa zomhlaba wekhofi, mhlawumbi omnye nomnye kunye. Shiya ukutyumla ngokushisa okufutshane malunga nemizuzu engamashumi mathandathu. Hlanganisa umhluzi obangelwayo weetapuni ezi-5 ze-sicalimon uze ushiye ukunika iiyure ezintandathu.
Kwisitya, funda ama-50 grams we-henna powder kunye nokunciphisa okufudumalayo, ukudibanisa rhoqo. Yishiye enye iindidi ezimbalwa. Yonke into, ukubunjwa kulungele ukusetshenziswa.
I-henna isetyenziswa njani ngokufanelekileyo?
Sincoma ukuqalisa ukuhlola umzobo ngomzimba ngeendlela ezilula. Ziyabalazela iifoto njengoko ufumana amava. Sebenzisa ukuqala i-stencil, ekufuneka ihlambulwe ngaphambi kokusebenzisa amanzi usebenzisa isepha. I-stencil isetyenziswe esikhumbeni uze ugcwalise i-henna slots nge-brush okanye isirinji ngaphandle kwenaliti.
Ewe, ukuba uqala ukudweba iphethini elukhumbeni ngeepensile uze uyipende ngepende. Ukudweba imigca elincinci kunokwenzeka ukuba usebenzise i-toothpick evamile.
Emva komzobo onomdla we-henna emzimbeni, vumela ukubunjwa ukuba umise ngokugqithiseleyo iiyure ezimbalwa, okanye kungcono ukushiya ubusuku bonke. Emva koko ipeyinti elomileyo kufuneka isuswe nge-kerchief eyomileyo okanye ngokukrazula umqolo weqayi.
Ukudweba ngesandla kungenza umzobo wendalo. Kule meko, sebenzisa izandla zakho ukudweba umfanekiso. Ngaphambi kokuba ufake ipeyinti, phatha isundu kunye ne-ejenti yokucoca ekhethekileyo kwaye ugcobe ngeoli yeoli ukuze ulungelelanise umbala. Emva koko ususe amanxuwa omswakama, kuba ulusu kufuneka luhlale lomile. Qala ukudweba umzekelo ongenamdla.
Ukulungiselela it tattoo inokuhlala ixesha elide, musa ukululeka umzobo kwithuba lokuqala emva kwesicelo. Kodwa ukugcoba ngeoli yeoliva kuyamkeleka!
Indlela yokukrazula iinwele zobuso kunye nomzimba
Ukusetyenziswa kwevengeni yesikhumba kunye neenwele
Ukufakwa kwesithombe kunye neendawo zokubala
Zonke iindawo zengxaki, ukusetyenziswa kwabafazi
I-Sandwich ngeeshizi, ham kunye neenanapple
Yiyiphi i-psychotype eyenza isibini sakho sibini?
Ndiwunqobe njani umona kubangaphambili?
Indlela yokuthetha nentombi yakho kwifowuni
Iphunga ne-banana fritters
Izityalo ezingaphandle kwezempilo
Iimpawu zengqondo zezingane zasesikolweni